Faallooyinka Gore ee ku saabsan isbeddelka muuqaalka Warbaahinta | Martech Zone
Faallooyinka Gore ee ku saabsan isbeddelka muuqaalka Warbaahinta
Monday, August 28, 2006 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Ruth Holladay's blog maanta wuxuu tilmaamayaa an article wareysi uu la yeeshay Al Gore oo uu weydiinayo fikradaha uu ka qabo warbaahinta. Gaar ahaan, wareystaha wuxuu su'aalo weydiinayaa Gore oo ku saabsan bartamaha warbaahinta, ama shirkadaha ama dowladaha (caalami ahaan). Gobollada Gore:
Dimuqraadiyaddu waa wada hadal, doorka ugu muhiimsan ee warbaahintuna waa fududeynta wadahadalkaas dimuqraadiyadda. Hadda wadahadalka ayaa la xakameynayaa, waa mid dhexe. - Al Gore
Cajiib. Ma ahan taageere Gore, runtii waan layaabay si daacad ahna waan ugu faraxsanahay fariintiisa halkan. Runtii anigu waxaan ka mid ahay ragga runti aaminsan in warbaahinta falaa isku day inaad saameyn ku yeelato jawigeena siyaasadeed.
Ha iga qaldamin… Uma maleynayo in warbaahintu ay tahay farabadan iniinyaha bidix ee wicitaanada qarsoodiga ah ee taleefanada isku dayaya inay ka tuuraan Jamhuuriga, waxaan si fudud u maleynayaa in dad badan oo ka tirsan warbaahinta iyo goobaha madadaalada ay leeyihiin nolol aad u kala duwan inteena kale. Natiijo ahaan, aragtidooda adduunka waxay u egtahay inay ka duwanaanayso. Intaas waxaa sii dheer, xaqiiqda ah inay aqoon fiican leeyihiin oo ay ku sugan yihiin meel awood sheegasho ah, waxay leeyihiin minbar-cagajugleyn lagu leexinayo fikradaha dadka.
Blogging-ka iyo internetka ayaa badalaya muuqaalkaas. Ka dib markii aan iska diiwaangeliyey 2 wargeys muddo ka badan toban sano, si daacadnimo ah kama sii qaadanayo mar dambe. Dhammaan wararkeyga waxaan ka akhriyaa khadka tooska ah, waxaanan akhriyaa jawaabta ay blogosphere ku leedahay warka. Inta badan maahan, waxaan bilaabayaa inaan arko warar badan oo ay qoreen dadka wax qora ee wax qora marka loo eego wargeysyada. Waxaan u maleynayaa in sababaha midkood ay tahay in balooggu uu baabi'inayo 'shaandheynta' fariinta.
Ruth ee blog waa tusaale fantastik ah tan. Ruth ayaa laga siidaayay xarigga tifaftiraha iyada oo barteeda internetka ay jajabineyso wadadeeda hore ee muuqaalka barta internetka ee Indiana. Waan jeclahay Ka dib markaan akhriyay maqaallada Ruth muddo sanado ah, ma aanan arkin xiisaha iyo ololka ku jira farriinteeda illaa ay ka fariisatay oo ay bilawday baloog. Ruut waa sidii dibigii ka fakaday dukaanka shiinaha! Waxaa laga yaabaa inaan ku raacsaneyn fariinteeda mararka qaar, laakiin ma sugi karo inaan aqriyo qoraalkeeda soo socda.
Rajadaydu waxay tahay in Internetku uu sii ahaan doono waddo cusub oo “lagu fududeeyo wada hadalkaas dimuqraadiyadda ah”. Waxaan rajaynayaa inay makaafoon ku siiso dadka aan codka lahayn ee adduunkeenna isla markaana aan ka dhex helo bulshadeenna dhexdeeda Erayada ku yaal bogga runti waa kuwo awood badan… gaar ahaan marka aan la xakamayn.
Hadalka xorta ah ha noolaado!
Codbixinta Toddobaadka Ganacsi ee Toddobaadka: Waa maxay Blog aad ugu jeceshahay?
Qaadashada B2B: U hel liis dheeri ah lacagtaada